sensor Factory - Mpanamboatra sensor China, mpamatsy
Laharana maodely: CLH100 mari-pahaizana: Famaritana fanamarinana fanamarinana fanamarinana fanamarinana fanamarinana taratasy mivaingana: Fitaovana H2S tokana dia fitaovana azo antoka sy porofo mipoaka ary natao hanakanana ny H2S. Detector H2S tokana dia mpanara-maso gasikara tokana tsy misy fikojakojana natao hiarovana ny mpiasa amin'ny fitrandrahana entona H2S mampidi-doza amin'ny toe-javatra faran'izay mafy. Na eo aza ny halehibeny madinidinika, ny detector H2S tokana dia misy endri-javatra hita matetika ao amin'ny ...
Temperature momba ny harena ankibon'ny tany sy metatra hamandoana GWSD100-100
Modely: GWSD100 / 100 Fampiharana: GWSD100 / 100 Mining Temperature sy Humidity Meter dia afaka mamadika hatrany ny mari-pana sy ny Humidity amin'ny lavaka ho lasa signal elektrika mahazatra ary avy eo mandefa amin'ireo fitaovana mifanentana aminy. Izy io dia afaka mampiseho ny fifantohan'ny metana amin'ny toerana misy azy ary manana ny fiasan'ny fampandrenesana transfinite mandre sy maso izany. Afaka mifandray amin'ny rafitra fanaraha-maso, fitaovana fanapahana gazy entona rivotra ary rivotra. Ampiasaina betsaka eo amin'ny sehatry ny fitrandrahana arintany ...
Meteran'ny mari-pana momba ny harena ankibon'ny tany GWD100
Modely: GWD100 Fampiharana: GWD100 Mining Temperature Meter dia afaka manova hatrany ny mari-pana amin'ny lavaka ho lasa signal elektrika mahazatra ary avy eo mandefa ireo fitaovana mifanentana aminy. Izy io dia afaka mampiseho ny fifantohan'ny metana amin'ny toerana misy azy ary manana ny fiasan'ny fampandrenesana transfinite mandre sy maso izany. Afaka mifandray amin'ny rafitra fanaraha-maso, fitaovana fanapahana gazy entona rivotra ary rivotra. Ampiasaina be eo amin'ny sehatry ny fitrandrahana arintany, ny zohy herinaratra ary ny mekanika ...
Metera fanerena fanodinana fahasamihafana GPD10
Modely: GPD10 Marika: TOPSKY Fampiharana: GPD10 Mining Différence Pressure Meter dia afaka manova hatrany ny tsindry fahasamihafana lavaka ho lasa signal elektrika mahazatra ary avy eo mandefa ireo fitaovana mifanentana aminy. Izy io dia afaka mampiseho ny fifantohan'ny metana amin'ny toerana misy azy ary manana ny fiasan'ny fampandrenesana transfinite mandre sy maso izany. Afaka mifandray amin'ny rafitra fanaraha-maso, fitaovana fanapahana gazy entona rivotra ary rivotra. Ampiasaina betsaka eo amin'ny sehatry ny fitrandrahana arintany io, e ...
Fitrandrahana H2S metatra GLH100
Fampiharana: GLH100 H2S Meter dia afaka mamadika tsy tapaka ny lohan'ny H2S ho lasa signal elektrika mahazatra ary avy eo mandefa amin'ireo fitaovana mifanentana aminy. Izy io dia afaka mampiseho ny fifantohan'ny metana amin'ny toerana misy azy ary manana ny fiasan'ny fampandrenesana transfinite mandre sy maso izany. Afaka mifandray amin'ny rafitra fanaraha-maso, fitaovana fanapahana gazy entona rivotra ary rivotra. Ampiasaina be eo amin'ny sehatry ny fitrandrahana arintany, ny zohy herinaratra sy ny mekanika ary ny làlan-drivotra miverina. K ...
Meter CO Meter GTH1000
Fampiharana: fampiasana sensor electrochemical mandritra ny androm-piafarana sy fanjifana herinaratra mikrô solosaina tokana, fisehoana LCD efatra, tsy fanairana fotsiny sy feo fanairana, fanarahana zotra, Backlight mandeha ho azy, fiasan'ny fanairana ambany herinaratra, fa marina sy azo antoka koa, lava fiainam-panompoana, volavola kely, lanja maivana, Fandidiana tsotra, fikojakojana mety, sns. Ity fitaovana ity dia be mpampiasa amin'ny fisian'ny fangaro entona mora mirehitra mora mandrefy hatrany ny ...
GYH25 Mining O2 metatra
Famaritana metatra ho an'ny fikarohana o2, fisehoana eo an-toerana, fampitambarana famantarana lava, feo ary fanairana maivana, fanitsiana lavitra fanitsiana infrared Application ity vokatra ity dia mamorona sensor oksizenina manan-tsaina taranaka vaovao. Miaraka amin'ny fivoahan'ny mari-pamantarana mahazatra, dia afaka miara-miasa na amin'ny karazana rafitra fanaraha-maso sy mpandika lalana izy mba hanaraha-maso tsy tapaka ny fatran'ny Oxygen amin'ny tontolo misy ny etona mifangaro mora mirehitra sy mipoaka. Manana ny fiasan'ny kaomina lavitra ...
Infrared CH4 metatra GJH4 (A)
Fampiharana: GJH4 (A) Infrared CH4 Meter dia afaka mamadika tsy tapaka ny lozisialy CH4 ho lasa signal elektrika mahazatra ary avy eo mandefa ireo fitaovana mifanentana aminy. Izy io dia afaka mampiseho ny fifantohan'ny metana amin'ny toerana misy azy ary manana ny fiasan'ny fampandrenesana transfinite mandre sy maso izany. Afaka mifandray amin'ny rafitra fanaraha-maso, fitaovana fanapahana gazy entona rivotra ary rivotra. Ampiasaina be eo amin'ny sehatry ny fitrandrahana arintany, ny zohy herinaratra sy ny mekanika ary ny rivotra miverina ...
Modely: GRG5H Marika: Fampiharana TOPSKY Araka ny fifantohana eo noho eo, ny fanairana transfinite ary ny fifehezana herinaratra. GRG5H Infrared carbon dioxide sensor Ity fitaovana ity dia manana ny finiavana, arakaraka ny fifantohana eo noho eo ny entona, ny fanairana tsy misy fetra ary ny fifehezana herinaratra, ny fanamafisam-peo fanamafisam-peo fanaraha-maso lavitra, ny fifandraisana niomerika ary ireo asa hafa. Ity vokatra ity dia Mampiasa ny haitao fandrindrana infrared infrared iraisam-pirenena mandroso, mandresy ny p ...
Modely ： marika GJC4 ： TOPSKY Famaritana ho an'ny metana ambany fifantohana, fisehoana eo an-toerana, fifandraisana amin'ny alalàn'ny lavitra, feo fanairana sy hazavana, fidirana lavitra infrared 1. Fampivoarana vaovao ho an'ny sensor methane marani-tsaina ity vokatra ity. Miaraka amin'ny output signal mahazatra. 2. Izy io dia afaka miara-miasa amin'ireo rafitra fanaraha-maso isan-karazany sy mpandika lalàna mba hanaraha-maso tsy tapaka ny fatran'ny metana amin'ny tontolo misy ny etona mifangaro mora mirehitra sy mipoaka. 3.I ...